Haweeney diiday in ay naas nuujiso cunug ay dhashay oo lagu xi... | Universal Somali TV
Haweeney diiday in ay naas nuujiso cunug ay dhashay oo lagu xiray kenya
Haweeney 25 Jir ah oo diiday in cunug yar oo ay dhashay ay naas nuujiso ayaa lagu xiray magaalada Thika ee dowlad degaanka Kiambu ee gobolka bartamaha Kenya.
Faith Nyokabi ayaa gurigeeda oo ku yaal xaafada Kiganjo waxaay uga tagyay cunuga ay dhashay oo afar bil jir ah hal isbuuc ka hor iyadoo seygeeda u sheegtay in aysan soo laaban doonin ilaa iyo inta uu siinayo 100,000 oo shilinka lacagta kenya oo u dhiganta 1,000 dolar oo lacagta mareykanka.
Ninka dhalay cunugaan ayaa waxaa ku wargaliyay dadka dariska la ah,waxaana ay u sheegeen in markii uu shaqada aaday ay xaaskiisa iyadana ay ka tagtay gurigeeda.
Seyga haweeneydaan oo lagu magacaabo Charles Kiiri oo ah shaqaale caadi ah ayaa ka codsaday in ay cunugeeda u soo laabato si naxariis ay ku jirto,balse waxay u sheegtay seygeeda in aysan naas nuujin karin cunuga maadama hooyadeed ay cirbad ku durtay si ay u caano guurto.
Nyokabi ayaa dhanka kale sheegtay in aysan u soo laaban doonin gurigeeda ilaa iyo inta ay ka heleyso lacagta ay dalbatay.
Ninkaan oo jahawareer ka muuqdo ayaa waxuu u gudbiyay waaxda dowlada u qaabilsan arimaha caruurta ee magaalada Thika kuwaasi oo dacwada u sii gudbiyay xafiiska ismaamulka Muranga oo ay ku sugneyd si haweeneydan loo soo xiro.
Mr Kiiri ayaa sheegay dhibaatada ugu weyn ee u dhaxeysa isaga iyo afadiisa ay tahay gabadha hooyadeed oo marwalba dalbato dhaqaale Joogta ah in la siiyo.
Sida laga soo xigtay madaxa daryeelka iyo xanaanada caruurta ee magaalada Thika Lina Mwangi, ayaa sheegay in haweeneydaan loo maxkamadeyn doono dayacaada iyo daryeel la,aanta ay ku sameysay cunugeeda.
Mwangi ayaa ugu danbeyn aabaha dhalay cunugan yar kula taliyay in uu u raadiyo qof si kumeel gaar ah u daryeela inta ay socoto dacwada ka dhanka ah hooyada dhashay oo diiday in ay naas nuujiso.
Kan-xigaHal sano kadib dowlad goboleedyada wa...
Kan-horeDhibane in dhihiisa ku waayay weerark...
40,455,763 unique visits